Awoodda PCBA - SHENZHEN KAISHENG PCB CO., LTD
PCBFuture waxay siisaa macaamiisheenna adeegga isku-tashiga Turnkey PCB ee lagu kalsoon yahay ee ku guuleysta natiijooyinka tayada wanaagsan ee qiimaha tartanka. Adeegga hal-ku-dhejinta PCB-ka oo ay ku jiraan wax soo saarka PCB, Waxyaabaha laga soocayo, iskuxirka PCB iyo Imtixaanka. Maaddaama aan nahay shirkad hoggaamineed oo ururinta guddiga wareegga daabacan, waxaan ku takhasusnay dusha sare iyo iyada oo loo marayo isku duubnaanta godadka, dhammaan nidaamyadayada iyo mashiinnadayada loo qaabeeyey inay la kulmaan naqshadeynta, qeexitaanka iyo mugga adeegyada shirarka elektaroniga.
Waxaan awood u leenahay kor u qaadista dusha sare ee PCB, iyo khadadka wax soo saarka SMT ee saxda ah ee Jarmalka, Japan iyo iwm Kooxdayada injineernimada waa xirfadle iyo kalsooni ku filan oo ay ku daryeelaan DFM, injineernimada, wax soo saarka iyo baaritaanka. Waxaan si dhakhso leh ugu gudbin karnaa elektaroonigga PCB-ga usbuuc gudihiis.
Cabirka ugu yar: 10mm x 10 mm
Xajmiga ugu badan: 500mm * 800mm
Adag, hayalka san, adag-hayalka san, Birta Base
HASL Lead ama Lead free, ENIG, Im Silver, OSP, Dahaarka Dahabka, iwm
5 milyan oo dhibic maalintii
1 gabal ilaa 500,000 kumbiyuutar
Single iyo double SMT / SMD
THT (iyada oo loo marayo kulanka tiknoolajiyada godka)
SMT & iyada oo loo marayo ururinta godka
Cabirka Chips-yada ugu yar
Rarayaal ka yar rasaasta rasaasta
Microscope ilaa 20X
AOI (Kormeerka Aaladda Iswada)
Hogaanka iyo Hogaaminta-Bilaashka ah
Tirey ama tubbo
Reel Qayb ah iyo Reel Buuxda
Faylasha Gerber ama feylasha qaabeynta
Liiska BOM (Bill of Materials)
Dooro oo meel dhig faylasha haddii aad leedahay
Hel Quote Golahaaga PCB:
Kharashka Golaha PCB oo ay ku jiraan kharashka waxsoosaarka PCB, qiimaha qaybaha, iskuxirka PCB / Qiimaha Imtixaanka. Si aad u hesho xigasho sax ah, fadlan u soo dir faylashaada Gerber, liiska BOM, shuruudaha soo-saarka iyo tirada looga baahan yahayiibinta @pcbfuture.com . Waxaan dib kuugu soo laaban doonnaa tixgelin rasmi ah 2 maalmood gudahood.